SIDEE U DARYEELI KARTAA MUDANE, TALOOYIN WAXTARKA LEH EE UBAXLEYAASHA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Beerta Lavateru waxay jecel yihiin fududaynta. Ma baqdo dabaysha iyo qabowga, waxaa si fiican u dulqaatay qorrax xoog leh, abaaro.
Haddii aad siiso xaalado caadi ah ee koritaanka, waxay ku dhufan kartaa keli ahaantiisa.
Noocyo caan ah iyo noocyo kala duwan
Dhirta ornamental waxay kala duwan tahay noocyada la soo bandhigay.
Waxay ku kala duwan yihiin cabbirka iyo midabka burooyinkeeda, dhererka dhererka, iyo xilliyo sii kordhaya.
Ogaanshaha noocyada masruufo dilka ah, waxaad ka fekeri kartaa naqshadda kaabayaasha.
Ma taqaanaa? Magaca ubaxa ee laga helay ereyga "lavatum", oo leh xididada Laatiinka oo macnaheedu yahay "maydhashada." Dhamaantiis, sababtoo ah midabka buraashu waa mid nadiif ah oo u muuqda sida qof horay u dhaqay. Inkasta oo ay dadku si fudud u yaqaanaan - "eeyga" ama "hatima".
Beerta ayaa caan u ah beeritaanka saddex nooc oo waaweyn oo ubax ah:
1. Saddex bilood ama sanadka sanadlaha ah, kaas oo si aan caadi ahayn u barbar dhiga xagaaga bartamaha illaa dhaxan. Bushka wuxuu koraa illaa 120 cm oo dherer ah. Ka mid ah noocyada ugu caansan ee noocyada this in latitudes our qaaday xidid:
"Goddess of Sun", oo laga yaabo in uu midabo kala duwan.
"Ruby Queen", adoo siinaya burooyin casri ah.
Pink Beauty waa casaan kulul.
"Laabbooyinka" leh ubaxyo casaan leh.
"Blanc Blanc" ayaa si cad u barbar socda.
"Silver Cap" waxay kala soocaan ubax midab leh.
2. Lacag-bixiyuhu waa Thuringian ama wennan. In jardiinooyin inta badan beeray noocyo noocan oo kale ah:
"IKatcher" midab casaan leh.
"Burgundy Vine" - casaan "khamri" midabka burooyinkeeda.
"Bregon Springs" waa midab khafiif ah.
"Lilac Lady" leh burooyinkeeda lilac.
3. Geed ama laba sano oo deerad ah. Muuqaalkiisu waa dabeecad dhan ilaa laba mitir. Ubaxku waa caadi ahaan midabo casaan ah, oo afkuna waa mid aad u cakiran. In cirqiga our inta badan beeray:
"Rosea", oo siinaya ubax leh salmon.
Candy Candy waa midab khafiif ah.
In qaybta diiran ee dalka, waxaad isku dayi kartaa taranta noocyo badan oo kulaylka-jecel:
Moorish leh ubaxyo guduudan oo hoos udhacay;
Cretan, oo la mid ah Moorish, laakiin waxaa laga yaabaa in midabada madow ee burooyinkeeda;
Badweynta Hindiya waxay u egtahay laba lafdhab oo ubax ah.
Noocyada qulqulatooyinka sii kordhaya marka la beerto abuurka dhul furan
Bannaanka ayaa leh su'aasha macquulka ah: sida loo soo saaro mudaharaad ay ku sameeyaan dhulkooda? Waxaa jira laba siyaabood oo dhalid ah: geedo iyo abuur. Qodobbadu waxay ku lug leeyihiin beerista aagga u dhow ee abuurka ah, iyaga oo udub dhexaad u ah oo kaliya ka dibna transplanting dhul furan.
Waxaan ka wada hadli doonaa isbarbardhigga habkan ee dhalashada dhirta kadib, laakiin hadda waxaan ku joogsaneynaa sida loo beeray geedka isla markiiba goobta loogu talagalay kobaca. Kobcinta qashinka laga bilaabo abuurku waxay ku lug leedahay dhulka lagu furo bisha May.
Baahida ciidda horteed waxay u baahan tahay in la qodo humus. Aan ku xunnahay in lagu daro nitroammofoski - qiyaastii hal qaado oo labajibbaar ah. m. Heerkulka dabka, samee qoto dheer oo cabbir ah centimitir, ku shub biyo diirran, ka dibna ku shub miraha qalalan. Ku dabooli dhulka leh humus, ka dibna filim hufan.
Toddobaadkii hore caleemaha ugu horreeya waa inay soo baxaan. Marka ay koraan ilaa 5 cm, filimka laga saari karaa, dhuuban soo baxay geedo, basaas sariiraha. Inkasta oo dhirta ay si fiican u soo saarto iyo is-abuurid.
Waa muhiim! Haddii aad rabto inaad ka hesho goobta xayawaanka qulqulka ah ee ubaxa, abuurka ama geedo waa in lagu dhex beeray goobo. Masaafada u dhexaysa godadka waa in ay noqotaa mid heerkul ah - 20-25 cm, laakiin shan geedo waa in lagu meeleeyaa mid kasta.
Sida loo daryeelo caleemaha
Fahmida sida loo koro geedo qashinka ah guriga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato meesha ubaxu ugu fiican yahay. Meelaha qorraxdu way ku habboon yihiin isaga, si kastaba ha noqotaa iftiinka qayb ahaan waa mid la aqbali karo.. Waa wax aan qabin carrada, inkasta oo ay si fiican uga jawaab celiso Bacriminta dabiiciga ah.
Laakiin haddii ciidda ay caato tahay, quudinta dheeriga ah ayaa loo baahan yahay hal mar bishii. Ugu horreyntii waxaa la fuliyaa bilowga xilli sii kordhaya. Si arrintan loo sameeyo, u samee xalka ka soo qaado hilibka nitroammofoski iyo HOL 10 litir. biyaha.
Quudinta muhiimka ah ee soo socota ayaa la sameeyaa marka buro soo baxaan. Xaaladdan, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Bacriminta Fosfat iyo potash.
Geedaha kor u qaadaya waxay u baahan yihiin in la xiro.. Waxay u dulqaadanayaan kulaylka, abaarta. Waraabinta waxaa lagula taliyaa maaddaama ay qoyaan, laakiin aan ka yareyn hal mar toddobaadkii haddii ay dhacdo kuleyl xoog leh. Dhirta dabiiciga ah waxay u dulqaadanayaan heerkulka ilaa -3 ° C.
Inkasta oo uu dhirta aan weli awoodin, waa in la daadiyo. Waqti ka dib, ubaxa laftiisa ayaa qarqinaya haramaha. Waxaa si joogta ah lagula talinayaa in laga soo saaro inflorescences. Tani waxay u egtahay tayad qurxin badan oo kicinaysa geedka si ay ubax dheeraad ah u noqoto.
Waa muhiim! Iyadoo da'da, caleemaha dhirta isbedelka midabka, noqoshada midab madow ah. Haddii ay caatoobaan oo dhalaalaan, ka dibna geedka waxaa ka maqan fosfooraska iyo nitrogen.
Noocyada beeritaanka la abuuray
Si loo go'aamiyo goorta la beero geedka geedo, waxaad u baahan tahay inaad ogaato wakhtigaa la qorsheeyay in lagu beero geedo dhul furan. Tusaale ahaan, haddii beeritaanka la qorsheeyay May, markaas waa lagama maarmaan in la gooyo beerashada iyo biqilka bisha Maarso.. Gobollada leh cimil diiran, beerto waxay horeyba u dhici kartaa Abriil.
Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso sanduuqa, ilaa hoose ee ku shub dheecaan, iyo sare - dhulka. Dhulka waa qoyan yahay, ka dibna abuurka qallalan waxaa lagu qiyaasay qiyaastii hal mitir oo qoto dheer. Goobta soo degta waxaa lagu daboolay muraayada, kaas oo la saaro ka dib marka ay ka baxaan geedka. Si joogta ah u hubi in gogol-xareedku uusan ku jirin galaaska.
Caleemaha ugu horreeya waa inay muuqdaan toddobaad ama laba goor ka dib beerashada. Waxaa la aaminsan yahay in ciidda si joogto ah loo qasi doono ilaa dhirta ay koraan oo yeeshaan. Haddii iftiinku uusan ku filneyn, waxaa lagama maarmaan ah in la abaabulo iftiin dheeraad ah, marmarna u rogo weelasha leh sprouts nalka. Kadibna waxaa lagu beeray dhul furan oo ku yaal fogaan ah 20-25 cm, ma iloobin in ay si joogto ah u biyaha.
Sida loo ururiyo abuurka
Uruurinta abuurka macnaheedu maaha wax cidhiidhi ah oo adag. Xilliga dayrta, marka uu geedka bilaabmayo bloom, sanduuqyada abuur waxay u muuqdaan meel ka mid ah burooyinkeeda. Markay qallalan yihiin, waxay u rogaan bunni. Seeds ayaa diyaar u ah in la goosto, haddii aad maqli kartid iyaga oo gudaha ku shubaya intaad ku dhejineyso sanduuqa. Goobaha la uruuriyey waxay ku jiri karaan ilaa shan sano.
Isku darka beeralayda kale
Tan iyo geedka waa qurux badan, waxaa badanaa loo isticmaalaa isku-dhafka ubaxyada kale si loo sameeyo sariiraha ubaxa. Lavater ma aha warshad dagaal badan oo si wanaagsan ula socota dhaqamada kale, sida:
Sida midabada midabka, noocyo cad oo ka mid ah kuwa la yiraahdo waxay si fiican u eegaan ubax kasta, gaar ahaan kuwa ageratum buluug iyo lilac petunia.
Ma taqaanaa? Cuntada bacrin ah iyo "dufan" waxay noqon doontaa dhulka ay ubaxu ku koraan, inta badan qurxinta ayaa ku jirta ubaxyada.
Isticmaalidda daayeerka naqshadeynta muuqaalka
Ubaxa waa mid aad u jecel naqshadeeyaha muuqaalka ee xaqiiqda ah in loo isticmaali karo labadaba madaxbannaan iyo isku dhafka dhirta kale. Waxay si fiican u taagan tahay faafinta geedaha, cagta ee geedo waaweyn, on cawska leh cawska.
Noocyada keena koritaanka, loo isticmaalo sameynta dusha sare, dhismayaasha qurxinta ama deyrarka. Noocyo kala duwan oo laastik ah oo siinaya midabyo kala duwan oo ka muuqda beerto kooxeed. Tusaale ahaan, marka ugu horeysa waxay sameeyaan cad, ka dibna casaan, ka dibna isku dar labadan nooc.
Haddii isla waqti ay leeyihiin korniimo kala duwan, waxaad ku gaari kartaa qoraallo cajiib ah. Markaad ubax ku koraan waa la gooyaa oo loo adeegsan karaa bustayaal.
Isticmaalka kaleba waa barkad
Dhalinyaro "Lacagta Thuringia"waa dalag daawo ah, hoygeedu wuxuu kudhowaa Althea, raajooyinkana waxaa ku jira faytamiin C oo badan iyo faa'iido leh, si loogu isticmaalo qufaca, qabow, cudurada mareenka caloosha iyo cudurrada haweenka.
Iyada oo dermatitis, waxaa wanaagsan in la diyaariyo faleebo asalka ah. Laga soo bilaabo caleemaha dhirta sameeyo poultices for xanuunada dareemayaasha, rheumatic, lichen, furuncles, pustules.
Sida aad u arki karto, muusiggu ma aha oo kaliya warshad cajiib ah oo qurxin kara shakhsi ahaan. Waxaa loo isticmaalaa daawada dabiiciga ah. Laakiin marka lagu daro dheelitirka dibadda, bannaanka u jeclaan ubax for unpretentiousness ee sii kordhaya iyo taranta.